ကျွန်တော်ပေးမယ်နော် — MYSTERY ZILLION
July 2009 edited October 2009 in Sharing
ဟာ..မဟာအောင်မြင်မှုကြီးဘဲ.... ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီကိုလည်း တစ်ခုလောက်shareဦးလေ ..PM ပို့ချင်ပို့လိုက်ပေါ့.. ၀ိုင်းပြီးကုသိုလ်ရချင်လို့ပါ...ဒါမှကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင် ကျွန်တော်လူဘ၀တုန်းက လူတွေကိုဒီလိုတွေကုသိုလ် လုပ်ဖူးတယ်လို့ကြွားလို့ရပြီ..ဟီးဟီး.. :-) ဒါမှအထောင်းခံရသက်သာမှာ
ရှင်သန်းခြင်းကင်းမဲ့နေတဲ့ ဒီ ပို့လေးကို အခုမှဘဲ အသက်သွင်းတော့မယ်။
eBoostr Pro 3.0.1.498 တဲ့
သူပြောထားတာကတော့ vista ရဲ့ Readyboost ကို XP ပေါ်မှာရအောင်လို့တဲ့ဗျ။ သူပြောထားတဲ့ အပြည့်အစုံကတော့ ဒီလို copy/paste လုပ်လိုက်တယ်။
If there is one thing that can speed up your computer, it's memory.
Adding more RAM can speed up your applications several times, decrease
loading times and improve overall performance of your PC. More memory
means less hard drive activity. But what if adding more RAM is not an option for you?
Maybe you just don't have the necessary tools or experience, or just aren't comfortable
with the idea of getting inside your PC. Or maybe you've gotanotebook computer
that's stuffed with RAM sticks or uses exotic and expensive memory. Or quite the opposite,
you might already have enough RAM and adding more memory does not result in any visible performance benefits.
Windows Vista enjoys ReadyBoost technology that uses external flash memory
to speed up system performance without adding more RAM. But what if you use
Windows XP and have no intention of upgrading?
Hold on to your Windows XP system! There is no need to upgrade just for the sake
of ReadyBoost! eBoostr speeds up Windows XP by using inexpensive flash memory.
Using eBoostr increases system responsiveness and makes big applications such as
Adobe Photoshop or Microsoft Office load much faster.
Unlike ReadyBoost, eBoostr is able to use almost any flash memory, including ReadyBoost certified units.
Use up to four USB sticks, CompactFlash, SD, MMC or xD cards to give your Windows XP systemaboost!
eBoostr works perfectly for desktop computers, but laptop users gain even more.
Laptop computers use slower hard drives than their desktop counterparts,
and benefit even more from reduced hard drive activity provided by eBoostr.
Notebooks not only work faster with eBoostr; they work longer. Less hard drive activity means
less power consumption, which results in longer battery life.
You might already have one or more flash sticks or memory cards sitting on your desk or in your digital camera.
Plug them in, run eBoostr and enjoy the extra speed boost!
MediaFire နဲ့ရော Rapid နဲ့ပါတင်ပေးထားပါတယ်။ Bagan သမားတွေကတော့ Mediafire နဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ။
Magic Video Capture/Convert/Burn Studio 8.1.8.25 တဲ့ဗျ
вЂў Capture Video, Audio and Images.
вЂў Burn video on DVD and create DVD burning menu.
вЂў Convert your movies in batch mode.
вЂў Convert and split all most-used videos.
вЂў Customize video screen size, audio/video bit rate, frame rate, aspect;
вЂў And much more!
download link ကတော့
connection အဆင်ပြေရင် sendspace ကနေဘဲဖြစ်ဖြစ် ifile ကနေဘဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်တင်ပေးမယ်နော်။
ဒီတစ်ခုကတော့ တော်တော်လေး အသုံးတည့်မယ်ထင်တယ်။
Flash Decompiler Gold 2.0.5.29 တဲ့ဗျ
Flash နဲ့ရေးထားတဲ့ swf တွေရော၊ exe တွေကိုပါပြောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုပါ့လားဗျ။
စိတ်၀င်စားရင် download link လေး
လာဘီ၊ လာပြီ ဒေါ်သက်ရီ အဲဟုတ်ပေါင် မှားလို့
RAR Password Unlocker တဲ့။ မသုံးခင် offline လုပ်ထား။ anti-virus ပိတ်သင့်ရင်ပိတ်ထား။ ဟဲဟဲ။ ကြုံဖူးလို့ပြောတာနော်။ ဒီဟာလေးကတော့ မသိသေးဘူး။
ယူချင်သပဆိုရင်တော့ ဒီမှာ download link တွေ။
၀က် ဒီပလုပ်မာတွေ ဘလော့ကာတွေအတွက် တော်တော်လေး ဂွတ်ထ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Top 20 Social Bookmaking Plugins for Wordpress вЂ“ Share your Posts
Sociable WP Plugin Download
download The Original Premium News
download Journalized Theme Version 2
download WP DashboardLike
download TimeCafe Premium Free V 2.0
download Blue Grace
download iQ2 Photoblog Theme
download Elegant Grunge
download Versatility Lite
download The Unstandard (Re-Coded)
download Grid Focus (Re-Coded)
download Carrington Blog
error မရှိဘဲ မြန်မယ်ဆိုပါ့လားဗျ။
download link လေးကတော့
ဂူးဂဲလ်အတ်ပလပ်စ်တဲ့ဗျ။ ပုံလေးကြည့်ပါ။ လန်းတယ်နော် ဟီဟိ။
ကွန်မကောင်းလို့ လေးခု တောင်ခွဲလိုက်ရတယ် ဟူး
(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)
၀င်းဒိုးကို အပ်ဒိတ်လုပ်မိလို့ သူခိုးတံဆိပ် အကပ်မခံရအောင် ဒီ software လေးက ကူညီပါလိမ့်မယ်။ နာမည်လေးက Windows Updates Downloader 2.40
update list (ULs) တွေကို စုပေးထားတယ်။ ဒီနေရာက ဒေါင်း။
ပါ၀င်တဲ့ OS တွေကတော့
Exchange 2003 x86
Office 2003 x86
Windows 2003 Server SP2 x86
WindowsXP SP3 X86
WindowsXP SP2 X64
WUD240B1138Setup.exe ကို အင်းစတော ကွန်ပလိဖြစ်တာနဲ့
ULS.rar ကိုဖြည်ချလိုက်။ မိမိ အပ်ဒိတ်လုပ်ချင်တဲ့ OS (သို့) software ရဲ့ ulz ဖိုင်ကို ဒတ်ဘယ်ကလစ်နဲ့ ဖွင့်လိုက်။ ပြီးရင် Windows Updates Downloader ဖွင့်ပြီး download လုပ်ရုံဘဲ။
၀င်းဒိုးကို အပ်ဒိတ်လုပ်မိလို့ သူခိုးတံဆိပ် အကပ်မခံရအောင် ဒီ software လေးက ကူညီပါလိမ့်မယ်။
အကိုရေ... အဲ့ဒီ သူခိုးတံဆိပ်ကြီး ကပ်ပြီးသား xp စက်တွေကိုရော ပြန်ပြီး တံဆိပ်ခွာလို့ ရနိုင်မလား
ရပါတယ်....... Windows တင်ထားတဲ့ အပိုင်း ဥပမာ C: > Windows>System 32> အောက်မှာရှိတဲ့ Wgtray ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကိုနာမည်ပြောင်း၊ နောက် တစ်ခု ရှိလိမ့်ဦးမယ် Wg နဲ့စတာပဲ... အဲ့ဒါကိုလည်း နာမည်ပြောင်းလိုက် မပြောင်းတတ်ရင် handsomesaikyawswarwai လို့သာ ပြောင်းလိုက်... .. အဲ့လို လုပ်ပြီးရင် restart ကစ်လိုက်.............
(မှတ်ချက်။ ။ လွန်ခဲ့သော တစ်ချိန်က MZ မှ ဆရာသမား တစ်ဦးဖြေကြားထားတာကို ပြန်လည် မှတ်မိသမျှ ပြောကြားလိုက်တာပါ.... သူ့ original post က ရှာလို့ မရတော့လို့... )
ပြီးရင် ဒီ ကုဒ်ကို ကော်ပီကူးပြီး notepad မှာ paste လုပ် install.cmd ဆိုတဲ့ name နဲ့ ဇစ်ဖြည်ထားတဲ ဖိုလ်ဒါထဲမှာ save လုပ်။
echo ETH0 Windows Genuine Advantage v1.7.59.1 (Updated) Crack Installer
echo ETH0 Windows Genuine Advantage v1.7.59.1 (Updated) Crack Uninstaller
echo ETH0 Windows Genuine Advantage v1.7.59.1 (Updated) Crack Cleanup
ပြီးရင် install.bat ကို on လိုက်။ ရီစတတ်ချ။ အိုကေရောပဲပေါ့။ ဒါက တံဆိပ်ကပ်ရက် မကုန်ခင်လုပ်တာနော်။ ကုန်သွားလို့ လောကင်တောင် ၀င်မရတော့ရင် ဆေ့မုတ်နဲ့၀င်ပြီး အပေါ်က ကုဒ်က လုပ်ရမဲဟာကို မန်ညူရယ်လုပ်ရမှာ။
ကို Sai Kyaw ပြေသလို(handsomesaikyawswarwai) ပြောင်းလိုက်လို့
၀င်ဒိုးက Acept ဖြစ်ရင်တော်သေး.. Acept မဖြစ်လို့ ၀င်းဒိုးပါမတက်တော့ရင် ကို Sai Kyaw ဘဲကူညီပေးရမှာ တဲ့နော်.. :106::P:P .. ရှတာနော်.. ဘရားသား.. ဟီး..:D
စိတ်ချ။ အဲဒါက ပြတင်းပေါက်တင်မကဘူး ဟပ်ကင်းလုပ်ထားတဲ့ စာရင်းပါတတ်လာမှာ.......:d:p
Koprinceakarit ရေ.. ဘာလို ့များ Memory stick ပြုပြင်နည်းကို ဆက်လက်ပြီးမရေးသားတော့တာလဲခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က အကိုစီက ပညာရတော့မှာပဲဆိုပြီးဝမ်းသာနေတာ။ ဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတော့ ဒီပြုပြင်နည်းတွေက တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်သိခဲပါတယ်။ အဲဒီမသိပါဘူးဆိုတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်က ထိပ်ဆုံးကပါ ခင်ဗျာ။ koprinceakarit အနေဖြင့် ဆက်လက်ရေးသားပေးစေချင်ပါသည်။ အခြားအခက်အခဲများ ရှိနေလျှင်တော့ မတောင်းဆိုတော့ပါ။ ကျွန်တော်စကားပြောမှားရင် ခွင့်လွတ်ပါ Koprince...
ဒီဟာလေးကို ifile ဖြစ်ဖြစ် mediafire ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ ပြန်တင်ပေးပါလား ခင်ဗျာ။
ကိုခုနှစ်မီးအိမ်ရေ။ အဲဒါက password ပါနေလို့ အခြားဟာလေးကို ညွှန်းပါရစေဗျာ။
Genie Backup Manager Professional 8.0.354.524 တဲ့ဗျ
ဒေါင်းလော့က ဒီမှာ။ mediafire လေးနဲ့ပါ။
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ.. ၂ ခုလုံး ယူလိုက်မယ်
သင်မှန်မှန် ဒေါင်းပေးဖို့သာ တာ၀န်ယူပါ။ လိုအပ်ပါက သူတောင်းစားလုပ်ရန် အဲ.... တောင်းရန် ကျွနု်ပ်တာ၀န်ယူပါသည်။
ဒီဟာလေး ကူညီပါ ခင်ဗျာ
ကဲ အသံနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ပေါ့။
A powerful program to work with audio files. With it you can record sound from microphone, internet, CD ROM, and any sound that passes through your sound card. The program can also convert files between popular audio formats, and that is not small, it is important - it makes very high quality. The program is easy to use, reliable and multifunctional.
вЂў Record any sound that passes through your sound card, such as streaming Internet radio, music fromaCD drive, sound fromamicrophone, etc.
вЂў convert audio files in any format you need.
вЂў Just edit the files and add various effects justacouple of mouse clicks.
вЂў Quickly remove the audio from the video with high quality.
вЂў rewrite the audio CD discs, and save your favorite music on your hard drive.
вЂў BurnaCD quickly and easily - even for beginners.
သူများတွေ လုပ်ထားတဲ့ SWF ဖိုင်လေးတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးတွေ မထည့်ချင်ကြဘူးလား။ ဒါလေးနဲ့ သုံးကြည့်လိုက်။ ပြီးရင် ကောင်းတယ်မကောင်းဘူး ပြန်ပြောပေးနော်။
သူ့ကို ဒီလို ညွှန်းထားတယ်။
Counter-Strike71 rapidshare+ netload BONUS (2009)
ကျနောကတော့ ဂိန်းမဆော့ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ ဂိန်မာကြီး၊ ငယ်၊ လတ် တွေအတွက်။
ဒါလေးကတော့ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးတည့်နိုင်ပါတယ်။
Final Uninstaller offersanew and better way to make your PC run more efficiently by cleaning up files and registry entries that were left after unsuccessful uninstallation. The program is based onapowerful leftovers database to support many functions of thoroughly scanning your computer, intelligently detecting leftover files of various programs, clearly listing applications that can be removed and completely uninstalling with only one clickвЂ¦ This easy-to-use Final Uninstaller allows you to say goodbye to nerve-wracking leftovers and to speed up you PC performance.
ဒါလေးကလည်း System သမားတွေအတွက် အသုံးတည့်ကောင်းပါရဲ့။
သူပြောတာတော့ ၀င်းဒိုး အိပ်စ်ပီ၊ ဗစ်စတာ၊ အော့ဖ်ဖစ် နဲ့ အခြား ဆော့ဖ်၀ဲပေါင်း 850+ ရဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ key တွေကို ရီကာဗာ လုပ်ပေးမယ်ဆိုလားဘဲ။ အဲဒါတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ အခြား ဖန်ရှင်တွေလည်း ပါသေးတယ်တဲ့ဗျ။
Recover lost product keys for Windows XP, Vista, Office and 850+ more programs
Recover Keys key finder program logo. Product key viewer Have you ever lost your keys? Perhaps, yes. In such case you can create duplicate or change the lock. What if you lost your activation keys for Windows operating system or other major software you recently purchased? It may costs you from hundreds to thousands dollars.
Reflexive ဂိန်းလေတွေကိုမှ ချစ်ကြတဲ သူများအတွက်။ Reflexive Games collection လေးပါ။
1. Empire of the Gods
2.7Wonders Treasures of Seven
3. The Hidden Object Show Season 2
4. Action Ball 2
The all-new Action Ball2isano-holds barred arcade game that blends the hottest brick-busting action you've ever seen with the thrilling battles of space shooters! As you use one of four selectable paddles to hit one or more balls toward eye-dazzling arrays of destructible objects, you'll also have to battle four new robots that are out to foil your efforts. Can you handle hot brick-busting action and thrilling battles in space? That's what Action Ball2is all about!
123 Flash Menu v4.1.5.1400
Developer တွေရော အခြား စမ်းသပ်ချင်သူများအတွက် အသုံးတဲ့မဲ့ software လေးပါ။
Flash Menu ကိုပြုလုပ်ဖို့ အဆင့် ၃ ဆင့်ပါဘဲတဲ့။
အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
123 Flash Menu isapowerful application that helps you create impressive and professional Flash menu within3steps.The program offers Flash menu with auto-width, macro-style templates, tree-view templates that support external XML, sounds customization, dynamic template changing, HTML code viewing and copying, automatic menu updating, image customization, multiple language characters and publishing wizards. Providing multi-level Flash menu with fully customizable text, font, link, background, border style, shadow style and pop-up effects without any programming skill.
ကဲ ကျွန်တော်လည်း ဒီနေရာလေးကနေ ကို ပရင့်ကို တစ်ဖတ်တစ်လမ်းက ကူညီမယ်ဗျာ... လာပြီ..
ဒါလေးက All In On : E-book လေး..ဗျ..
200 Hacking Tutorials တဲ့.. မိုက်တယ်..ဗျ.. ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့လူတွေကတော့ ကောင်းတယ်လို့..ပြောကြတယ်.. ဒီမှာ.. ဒေါင်းပါ..
Hiren Boot cd 9.9 တဲ့ဗျာ
recovery tool တွေအပြင် tool ပေါင်းတစ်ရာကျော်လောက်ပါတယ် boot cd ပါ
ဘာ tools တွေပါလဲသိချင်ရင်တော့
ဒါလေးက photoshop CS5 လေးပါ
သင့်ရဲ ့error တွေကိုပက်ပက်စက်စက်ဖြေရှင်းပေးမယ့် err cleaner လေးပါ သုံးကြည့်ပါစေတနာကိုသိပါလိမ့်မယ် :D:D:D
flashexe builder (full) လေး ifile.it မှာတင်ပေးပါဦး
မဆီမဆိုင် မေးရအုံးမယ်။ကိုယ့်ခေါင်းစဉ် နဲ့ thread တစ်ခုတင်ချင်လို့၊ဘယ်ကနေ တင်ရမှာလဲဟင်၊
ဟိုဖိုရမ်ကဟာ ဒီဖိုရမ်ယူလာတယ်လို့မပြောကြပါနဲ့နော်။ ကျနော်လက်တွေ့သုံးကြည့်ပြီး တကယ်ကောင်းလို့ ညွှန်းလိုက်တာပါ။ ပဒုမ္ပာက အက်ဒမင်ကြီး ကိုမွန်းစတားရော့ ပေးထားတဲ့ အင်ဖေါ်မေးရှင်းလေးပါ။
မြန်မာစာအဖွဲ့က ထုတ်ေ၀တဲ့ မြန်မာ − အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်လေးပါ။ .NET Framework 2.0 နဲ့ ရေးထားပါတယ်။ မြန်မာလိုရိုက် အင်္ဂလိပ်လိုရှာချင်တဲ့သူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်။
လောလောဆယ်တော့ ရက်ပစ်မှာ တင်ရတာဘဲ အဆင်ပြေနေလို့။ ရက်ပစ်နဲ့ဘဲတင်ပေးလိုက်တယ်။
အော် မီဒီယာဖိုင်းယား မှာလည်းတွေ့တယ် လင့်က
fate wrote: »
MZ Home Page ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ...
Top Posters အဲဒီအောက်မှာ
Site Navigation ရှိတယ်။
အဲဒီ Site Navigation အုပ်စုထဲက Forum ကို၀င်လိုက် Bro.
အဲဒီမှာ ... အကြာင်းအရာတွေ သူ့အုပ်စုနဲ့သူရှိတယ် ... eg. Networking , Anti-Virus , Autocat စသည်ဖြင့်ပေါ့။
Bro ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ Link ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် New Thread ဆိုတဲ့ Button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆို OK ပါပြီ ... :67:
ကဲ...ဒီတစ်ခါတော့ PC လေးထဲမှာ ကားမောင်းသင်ရင်း လေ့ကျင်ချင်သူတွေအတွက် Real Driving Simulator လေးပါ။ အပြင်မှာလေ့ကျင်ရင် အန္တရာယ်များတယ်လေ။ ဒီတော့ PC လေးမှာ အရင်လေ့ကျင့် ပီးမှ လက်တွေ့မောင်းကြည့်ပေါ့နော
ရွေးချယ်စရာ ကားပေါင်း 700 ကျော်ပါတယ်။ အဲ Track ကားဆိုလည်း 50 ကျော်ပါတယ်။
2008 ကထုတ်ထားတာပါ။ နာမည်က Gran Turismo4တဲ့။ အမျိုးအစားက ပြိုင်ပွဲပုံစံပါ။ PC မှာဘဲ ကစားလို့ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ ဆိုဒ်ကတော့ 3.97 ဆိုတော့ DVD မှဘဲ အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော...
Pentium41500Mgts
လောလောဆယ်တော့ ရက်ပစ်မှာဘဲချိတေးရယ်။ လိုချင်ရင်ပြော ကျနော့်အကောင့် ခဏပေးဒေါင်းမယ်။
တွေ့ဘီ Megaupload လင့်